Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [VaR chinozunguzirwa Operations]
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [VaR chinozunguzirwa Operations]
Raparadza kwacho wavers pakati tariro uye kutya uye asingauyi rova ??uyewo, ndinofunga kuti ndiyo nepachinko chaiyo mafaro. Zvisinei, kana raparadza ndiko, kuti zvimwe zvinhu anotaura Chang, kana usingaiti kutsikwa haasi rova ??zvachose, zvingava vamwe vanhu vakanga wakambofunga kuti zvaizova sei. In
, uye kwete vouta raparadza, achitaura apo uye sei takatsunga kuti mumwe nomumwe nepachinko muchina, iwe chikamu ROM iri iiswe. ROM uye kuti rotari jackpot, muchina chirongwa kana mugove kuzosimbisa raparadza, iri tsinga. Ndiwo nepachinko muchina mwoyo. Kana
muenzaniso achiti: nepachinko jackpot rotari rwakafanana Roulette, imwe yadzo dzichitenderera rimwe Roulette, edza kufungidzira kuti muzana zvinosimbisa kana ndokuiswa jackpot. Zviri, ndinofunga nyore kunzwisisa kufunga kuti rakaitwa muna ROM. Kugara ROM ndiko, mukana ndibate hombe raparadza chichava guru raparadza mukana mukuru nepachinko muchina.
chii anonzi kumashure ROM ndechokuti, Uchikata akafanana kwakasarudzwa, yaifanira subtracted ari pa nyore, anoti zvisiri pamutemo ROM. Zvisinei, mune dzakawanda nepachinko yaiitirwa, saka isu kushanda nguva dzose ROM zvasara kuti yakasvika kubva mugadziri, asi nguva ino, ndinoda kutarisa pakuverengwa tsika ROM dzose.
nguva ROM, tiri kuenda kutamira mumugwagwa jackpot mukana. Kana mumwe mukana maminitsi 340, akarova zuva, vachidzokorora zuva murege rova, imi zvinhu kuedza wekuita pedyo mukana. In muenzaniso, kana pane mazuva hapana mashoma pa, nokuti unoedza kutamira mukana mumugwagwa, uye kunze pakarepo. Izvi ndizvo zvinotaurwa kuva nefungu jackpot, nokuti kuti pakarepo payout iri kana ejection. Uye kubva
, akadzokorora kana kwete kunze, zviri pamusoro inenge mwedzi, iwe vanonzi wekuita kumugwagwa jackpot mukana. Kuti kuverenga chinozunguzirwa romwedzi ndechokuti, ndechokuti Verenga tsika dzose ROM. Sarudza muenzaniso kuti kunetseka, kuburikidza nepachinko yokumusoro ose zuva, regai kubuda zuva kwaiteverwa mazuva mazhinji, ari zvakadini ino mafungiro, kana kumativi nguva chii ruoko bhora vakabuda, Tichafara kutora mashoko zvakaenzana.
izvozvo, uye mberi mwedzi mishoma, sefungu netafura, vanonzi mutemo muzokuona. Zvakanaka nguva wave, kana mari, zvinoreva kuti kuhwina kubva muzana chinowanzoitika kumukazve. Munguva nepachinko, hapana imwe muvatatu muchina paradzanisa. Nokuparura bhora ndechekuti hazvirevi kuti unowana 100%. Zvisinei, mune imwe nepachinko yokumusoro, akatambanudza pamwero wenyika chiyamuro mutengo uye payout, humboo kuti muchina paradzanisa vachabuda somunhu kusanganiswa ukoshi iri kwaita akaverenga mazuva ose.
nhasi, chii muzana ikabudapo, kana bhizimisi yapera, ndinoziva pakarepo. In
nepachinko parlors, kuti anoda kuitwa muchina, zvichava raireva pamwero kuitwa musoro wangu. Asi, imi murefu kana kunoda masimba pakuongorora, asi haritombotauri kureva pane vimbiso kuti zvirokwazvo kunze. Chinhu pasina kufunga, pane anoramba tinongoita kunze, ndinofunga nani kutenda zvokuti kuhwinha kubva muzana kunowedzera. ROM ndiko, nekuti muRugwaro zvirimo zvose tafura nepachinko muchina, kana uchida, tapota edza kupikisa.
apo ??ona kuburikidza netsika
Horukon, uchakwanisa kudhonza kukunda rurefu mukana kuva kukwanisa kuverenga kunyange mafungu ROM pamwe chete. It anoita. Chinhu pasina kufunga, pane anoramba tinongoita kunze, ndinofunga nani kutenda zvokuti kuhwinha kubva muzana kunowedzera. ROM ndiko, nekuti muRugwaro zvirimo zvose tafura nepachinko muchina, kana uchida, tapota edza kupikisa.
Horukon, uchakwanisa kudhonza kukunda rurefu mukana kuva kukwanisa kuverenga kunyange mafungu ROM pamwe chete.